Vaovao - Ahoana no hisafidianana borosy nify
Voalohany indrindra, rehefa mividy kaopy fanasana vava dia mila mitandrina ny famolavolana borosy nify amin'ny antsipiriany izay hazavaina amin'ireo dingana telo manaraka.
Voalohany, mila mijery tsara ny endrika famolavolana borosy nify isika, toy ny endrika endrika onja, izay mifanaraka tsara amin'ny lava-bava ary afaka manadio tsara kokoa ny nify.
Ny dingana faharoa dia ny fitsaboana volo malefaka amin'ny borosy nify, toy ny volo malefaka matevina avo lenta, izay afaka miaro tsara kokoa ny nify tsirairay hampihenana ny vokatry ny fiompiana bakteria.
Ny dingana fahatelo dia mitaky ny fifantohana amin'ny antsipirian'ny fikirakirana ny borosy nify, toy ny hoe ergonomic kokoa ny fanokafana ny dian-tànana, na feno sy mamirapiratra ny lokon'ny borosy nify.
Amin'ny dingana manaraka dia mila mitandrina ny zavatra takiana amin'ny borosy nify isika, toy ny borosy nify malefaka, raha azo antoka ny loha borosy ary mahafeno ny fepetra takiana amin'ny sakafo, ary azo antoka ve ny fonosana fahadiovana. Mandritra izany fotoana izany dia mila mitandrina ny volon'ny borosy nify ianao, toy ny hoe ny fitsaboana maranitra dia mety hampihena ny fahasosoran'ny siligaoma ary hahatratra ny vokatry ny famenoana ny lavaka am-bava, ary na ny lamosin'ny loha borosy manana asa fanadiovana koa. Ilaina ihany koa ny mitandrina ny famaritana ny vokatra borosy nify, toy ny fitaovana, ny loko, ny efficacy, ny kalitaon'ny volom-borona, ny habe, sns. Hahazoana antoka ny vokatry ny traikefa fampiasana.
Farany, misy karazana loko borosy nify. Rehefa misafidy borosy nify ianao dia tokony handinika ny fisafidianana iray arakaraka ny safidinao loko manokana sy ny fomba tianao indrindra, ary amin'ny farany misafidy borosy nify tianao.